Ibhola Valve, Butterfly Valve, Hlola Valve - DEBIEN
Ikhwalithi ephezulu DIN F5 cast iron mpo flange g ...
Factory ngqo umusi lokushisa eliphezulu API 600 c ...
High-amandla futhi ukugqwala ukumelana st German ...
China ifektri amanani ductile y y uhlobo abakhwabanisi s ...
UDebien uthuthuka ngokuhamba kwesikhathi, uvuselela imishini, eqopha ngobunono umkhiqizo wethu, egxile ekwakheni imikhiqizo esezingeni eliphakeme, futhi ephendula ngenkuthalo izimfuno zemakethe ngobuhlakani.
Eminyakeni yamuva nje, uDebien ubonile ukuqwashiswa okukhulayo emkhakheni wobunjiniyela nasensimini yamazwe omhlaba, kusungulwe ubudlelwane besikhathi eside nobuzinzile bokusebenzisana namabhizinisi adumile kanye namaqembu amaningana amazwe omhlaba emkhakheni onjenge-petroleum, i-petrochemical, i-water conservancy kanye ne…
Uyini I-Globe Valve Futhi Wenziwa Nini ...
Amagilavu ​​eglobe agijinywa ngesondo lesandla futhi alawula nokujikeleza kwamanzi. Kodwa-ke, futhi zakha ukulahleka kwengcindezi okukhulu. Ukukhetha i-valve efanele kuyadingeka, njengoba izinhlobo ezahlukahlukene zehlukile ...
Ama-valve wokuhlola ngokuvamile afakwa kupayipi ukuvimbela ukugeleza emuva. I-valve yokuhlola ngokuyisisekelo i-valve yendlela eyodwa, ukugeleza kungahamba ngokukhululeka ohlangothini olulodwa, kepha uma ukugeleza kuphenduka, i-val ...
Amathiphu wokulungisa nokulungisa i-Butterfly ...
Ivelufa levemvane luhlobo lwedivayisi elawula ukugeleza, okubandakanya idiski ejikelezayo yokusebenzisa uketshezi olugeleza kule nqubo. Ngokuma mpo kwe-valve uvemvane, kukhona i-m ...
Y Uhlobo strainer Heavy-duty ipayipi isihlungi screen i ...
I-China y thayipha ama-strainers abahlinzeki
DIN3352 F4 Ibanga Valve 8 Gost Ductile Sakaza Iron ...
Globe Amaphayiphu Globe Control Valve Bellows Contro ...